Junior Accountant at Royal Club Beverages Co, Ltd | MyJobs
Any Graduate ( LCCI- level III ) (Pass) or B.Com/ B.Act / B.A (Eco) /D.A (LCCI-UK)• Minimum experience of (3) year in Accounting fields•
Accounting နှင့်ပတ်သက်သော Diploma နှင့်Certificate များရရှိထားသူဖြစ်ရမည်. Accounting နှင့် ပတ်သက်၍ Monthly Report, များကို စနစ်တကျရေးဆွဲ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။. Accounting နှင့်ပတ်သတ်သော operation ပိုင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်. Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်. Accounting နှင့်ပတ်သက်သော Software များကို အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်. လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိရမည်